Gịnị Ka “Ọnọdụ Azụmaahịa” Pụtara n’ezie? | Martech Zone
Gịnị Ka “Ọnọdụ Azụmaahịa” Pụtara n’ezie?
Dị ka onye mere ọrụ nke ọdịnaya, nkwukọrịta, na ịkọ akụkọ, enwere m ọnọdụ pụrụ iche n'ime obi m maka ọrụ nke "gburugburu". Ihe anyị na - ekwupụta - ma ọ bụ n'achụmnta ego ma ọ bụ na ndụ nke aka anyị — ga - abara ndị na-ege anyị ntị uru naanị mgbe ha ghọtara ihe ozi ahụ pụtara. Na-enweghị gburugburu, ọ pụtara ihe furu efu. Na-enweghị gburugburu, ndị na-ege ntị na-enwe mgbagwoju anya banyere ihe kpatara gị ji agwa ha okwu, ihe ha kwesịrị iwepụ, yana, n'ikpeazụ, ihe kpatara ozi gị nwere ihe jikọrọ ha.
Ntughari bu ihe ndi kpochapuru (na nke kachasi iwe) nke ihe omuma ahia. Ebe ihe ị lere n’oge gara aga na-eso gị n’azụ ugbu a ma ị ka nwere mmasị ma ọ bụ na ịnweghị. Hụ mgbasa ozi maka sọks mgbe m na-elele weebụsaịtị maka ebumnuche azụmahịa abụghị ebe, yabụ na gburugburu ya. Ma otutu ihe n’amaghi ama na aputa ihe na nkparita uka - mgbe ihe ikwuru na-aputa ihe na nzuzu ma obu na-aghaghi anya, i mara na o ghaghi ikwuputa ihe ndi ozo ka i na ekwu ma o bu juo.
The Oxford English Dictionary si otú a kọwaa okwu ahụ “gburugburu”
Ọnọdụ etolite maka emume, nkwupụta, ma ọ bụ echiche, na etu esi nwezuo oke ghọtara ma nyochaa: ewere mkpebi n'ime ihe dị ka zubere ebipụ na mmefu
Akụkụ nke ihe edere ma ọ bụ kwuo okwu ahụ ozugbo ebu ma soro okwu ma obu uzo ma dokwuo anya ihe ọ pụtara: nhazi okwu na-emetụta ọnọdụ nke okwu pụtara
Yabụ ọ bụrụ na anyị etinye nkọwa nke gburugburu maka omume nke ire ahịa, ebe “ahịa” gụnyere ịkọrọ ndị na-ege ntị otu ozi a kapịrị ọnụ, mgbe ahụ ndị na-ere ahịa kwesịrị ị paya ntị nke ọma na ihe dị n’iru ma ọ bụ soro ịgbaso ozi ha. Ma ọ dịkarịa ala ma ọ bụrụ na ha chọrọ ka ndị na-ege ntị ghọta ihe okwu ha na-ekwu ma ọ bụ mkpa ha bara.
At Sitecore, anyị agaala ikwu na ndị ahịa na ndị isi dijitalụ nwere ike ijikwa ahụmịhe ndị ahịa na-eme nke ọma mgbe ha na-ere ahịa na gburugburu etu ndị ahịa si emekọrịta na akara ha. Ọtụtụ ahịa akpaaka na-arụ ọrụ na-anwa ịre ahịa (dịka, ọ bụrụ na ndị ahịa budata akwụkwọ ọcha, mgbe ahụ, a na-ezigara ha broshuọ izu abụọ ka nke ahụ gasịrị). Mana nsogbu nke ọtụtụ nyiwe akpaaka na-ere ahịa bụ na ha na-eburu n'uche mmeghachi omume na email. Ha anaghị echebara ihe onye ọrụ ahụ nwere ike ime mgbe ibudata akwụkwọ ọcha. Gịnị ma ọ bụrụ na ha etinye ọtụtụ awa na weebụsaịtị? Ma ọ bụ tweet banyere akwụkwọ ọcha na-esote ụbọchị? Gaghị achọ ịgbaso ọsọ ọsọ karịa izu abụọ?
Izu ahia nke oma na-acho karia ihe akpaaka ahia nwere ike inye. Anyị kwenyere na ọ na-ewe teknụzụ nke na-enyere ọrụ atọ aka:
Ikike ime kpokọta ọgụgụ isi banyere ihe ndị na-ege gị ntị na-eme, ebe ọ bụla ha nọ, tupu ị na-agakwuru ha. N'aka ozo, dika OED si kwuo, ihe bu uzo ngabiga gi.
Ikike ime jikwaa ọdịnaya dijitalụ, ma ọ bụ ntụgharị, n'onwe ya. Ọ bụrụ n’inwee ọtụtụ ndị ahịa, ịchọrọ ijide n’aka na ị ga - eme nke a na ọkwa, ọfụma.
Ikike ime nyefee ọdịnaya ahụ ebe ọ bụla onye ahịa gị nwere ike, na ngwaọrụ ọ bụla, n'ụzọ akpaka ka ụfọdụ omume ndị na-ege ntị akọwapụtara na-akpaghị aka na-ebute nnyefe nke ọdịnaya ahụ. Ma ọ n’eme na oge izizi ikwuputara ya. N’ikwu ya n’ụzọ ọzọ, ị na-achịkwa ihe ha hụrụ na mgbe ha hụrụ ya ma ọ bụrụhaala na ọgụgụ isi gị gbasara ahụmịhe ha na-agwa gị na ha adịla njikere iri ihe ị ga-eweta.
Ọ dị ezigbo mfe, n’ezie, mana teknụzụ nke nwere ike ime ya bụ ihe mgbagwoju anya. Anyị na e dere banyere gburugburu ahịa na a akwụkwọ ọhụrụ dị bipụtara, na-akpọ “Ọnọdụ ahịa maka ọnụ ọgụgụ. ” Anyị na Wiley Press (onye na-ebipụta akwụkwọ a ma ama "Maka Dummies" ị hụrụ n'ụlọ ahịa akwụkwọ) mepụtara ya, ọ na-ekpuchikwa:
Kedu otu ndị ahịa dijitalụ si gbanwee na ihe kpatara atụmanya ha maka ụdị ji agbanwe
Kedu otu ahia ahia si enyere gi aka iru ihe ndi mmadu choro
Ihe ịchọrọ na teknụzụ ire ahịa iji wepụta nkwa nke ịre ahịa gburugburu
Enwere ihe ọzọ, mana ndị ahụ bụ igodo ụzọ bụ isi. Anyị nwere olile anya na ị masịrị ya, yana na enyela m gị oke ederede maka akwụkwọ ahụ ka ị hụ uru ọ bara na nbudata ya. E kwuwerị, ka ọ dị site na ọdịnaya ọdịnaya a iji kwurịta okwu na-enweghị gburugburu. Ka m mara ihe ị na-eche banyere akwụkwọ na-aza ajụjụ n'okpuru!
Budata Nkwupụta Okwu Gburugburu maka Dummies
Tags: onodugburugburu ahịagburugburu ahịa maka dummiesgburugburu ahịadummiessaịtịwiley
As VP Sitecore nke Ahịa ahịa, Onye isi edemede, Charlotte na-elekọta atụmatụ na atụmatụ nke akụ ọdịnaya gụnyere akwụkwọ ntanetị, vidiyo, na akwụkwọ ọcha nke na-ada ụda ma na-enyefe ndị ahịa Sitecore na atụmanya. Ọ na-anụ ọkụ n'obi banyere ịghọta mkpa na nsogbu ndị na-ege ntị ka ọ na-enwe banyere Sitecore na ọdịdị teknụzụ ahịa.
eHarmony Na-ebupụta Egwuregwu Egwuregwu maka Ọrụ… Srsly
Edemede mara mma, Charlotte. Ọdịnaya a na-enye echiche doro anya banyere ihe azụmaahịa gbara ya gburugburu na otu esi ewe ahịa ọdịnaya na ọkwa ọzọ. Ga-agbaso njikọ ahụ ma kesaa ahụmịhe m mgbe m gụsịrị akwụkwọ a.